Kufsiga maxaa keena akhriso
Raga maxaa ku kallifa inay dumar kufsadaan? Waa su'aal u baahan jawaab lagu qanco, marka hore waa in la ogaadaa in islaamka uu xarimay sinada , sinada waxaa laga wadaa nin iyo naag inay isu galmoodaan iyagoon is qabin ama uuna dhexmarin meher waxayna ka mid tahay sinada dambiyada waaweyn oo naarta Alle lagu mutaysto.
Kufsiga waa maxay haddaba?
Kufsiga ama kufsashada ama xoogidda waa in lagu dirqiyaa gabar ama naag in galmo lala sameeyo iyadoon raalli ka ahayn, marka qof raba inuu haween kufsado inta badan wuxuu adeegsadaa hub ama awood ka tan badan gabadhaas.
Kufsashaalka wuxuu ka kooban yahay labo dami laysku daray sino iyo dulmi iyo boob labada waa dambiyo waaweyn, waxaa sii raacaya jirdilka iyo fadeexadda la gaarsiinayo gabadha la kufsanayo sidoo kale sawirka la sawirayo iyadoo qaawan sida goor dhow ka dhacday soomaali galmudug, inta lix wiil ay soo qabteen gabar soomaaliyeed oo da' yar ayay si xoog ah u fuuleen iyagoo ka duubaya falka ay samaynayeen.
Marka xukunkooda muxuu noqon karaa?
Runtii waxay qaadanayaan xukunka loo yaqaano shareecada islaamka xiraabo waayo waxay adeegsadeen hub iyagoo ku sii daray inay naag sharafteeda ku cayaaraan, dadka xiraabadan dhowr qaab ayaa loo ciqaabaa in la xabiso iyo lugaha iyo gacmaha laga jaro si Isdhaaf ah iyo in la laayo, taasna waxay u noqonaysaa dambiyada ay galeen iyagoo hub wata, waayo hubka kaalin weyn ayuu ka qaadanayaa dhacdada kufsashaalka.
Dadka xiraabada inta badan waxay xoog ku qaataan hanta marka hantida waxaa ka muhimsan sharafta gabadha , waa dulmi barer ah oo aad u daran oo laga naxo, raga qooqan oo hub gacanta u galay oo jaahiliin ah waxaan oo kale ayay ku dhaqaaqayaan, haddii aan abaal daran la marinin waxaa laga yaabaa inay falkan soo celceliyaan oo dad kale ay ku dayaan, runtii raaxada ay ka helaan shaydaan baa u qurxiyay qof in lagu xadgudbo raaxo ma aha, qof raba inuu raaxo helo wuxuu ka heli karaa guurka jidkaas ayaa kuu furan oo Ilaahay kuu banneeyay ee ma aha inaad hub qaadato gabdhaha islaameed aad xoogto,
ma rabtaa in la xoogo walaashaada, ma rabtaa in la kufsado hooyadaada, ma rabtaa in la kufsado naag qarabadaada ah?
Jawaabta waa layska garanayaa marka iska ilaali inaad ku fikirto sheekadan mar kale.
Sidoo kale baraha bulshada waxay ku cayaareen dhalinyarada da'da yar, waayo qof kasta wuxuu ku fikiraa inuu soo dhigo wax lala yaabo, midka hadlo mid gabyo mid ooyo siiba dadka da'da yar, taas waxay keenaysaa inuu qofka ku fikiro wax xun inuu meesha soo dhigo, runtii dadka somalida waa jaahiliin waayo inay dameero yihiin waxaad ka garanaysaa sida ay u taalo soomaaliya laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo hadda dadka waxay dhihi kartaa waa dugaag, kufsiga hadda lala yaaban yahay wuxuu u dhici jiray si caadi ah , siiba magaalada muqdisho, dadka muuryaanta ahaa caadi bay u xoogi jireen naagaha isbaarada loo dhigto, xitaa waxaa la sheegay muuryaan rag fuushay oo rag u galmooda, waad ogtahay dadka raga fuula dambiga ay kasbanayaan maxaad moodaa iyadoo ay xoog tahay waa dullinimo in manta naag ama nin la xoogo.
sidoo kale waxaa muhim ah in la ogaado kusiga waxa keena
naagta inay raga dhex boodo oo aysan ka fogaanin
sababahan way kaalmeeyaan inuu kufsi dhaco